‘छल्की’ मा दिपाश्रीको यो कस्तो रुप ? « Ramailo छ
‘छल्की’ मा दिपाश्रीको यो कस्तो रुप ?
निर्देशक तथा अभिनेत्री दिपाश्री निरौला ‘सत्रुगते’ को छायाँकन लगत्तै अर्को फिल्मको छायाँकनमा व्यस्त भएकी छन् । थारु भाषाको ‘छल्कि’ नामक फिल्ममा दिपाश्री मुख्य भूमिका निभाइरहेकी छन् । केशव रायमाझीको लेखन तथा निर्देशन रहेको फिल्ममा थारु भाषाका कलाकार राजेन्द्र भगतको मुख्य भूमिका छ ।
फिल्ममा कलाकार जय चौधरी, प्रज्वल माझी, लेजिना सुवेदी, राज नारायण सेन लगायतको भुमिका रहने छ भने अतिथी कलाकारमा रुपमा नायिका नायिका रेखा थापा पनि रहनेछिन् । २५ लाख लागत रहेको फिल्ममा राजेन्द्र भगत कार्यकारी निर्माता र कन्नुलाल चौधरी मुख्य निर्माताको रुपमा रहेको छन् । यस्तै बद्री नारायण माझी, अमलेश महतो निर्माता र कार्यकारी निर्माताको रुपमा नरेश चौधरी, सह निर्मातामा प्रभु प्रमानन्द चौधरी, मनोज चौधरी, प्रशुराम चौधरी, सुनिता चौधरी रहेका छन ।
फिल्मको छाँयाकन दार्जिलिङ, सिक्किम, बर्जुताल, विराटनगर, जनकपुर लगायतको स्थानमा हुनेछ । नृत्य निर्देशन कमल राईको छ । थारु भाषामा छल्की शब्दको अर्थ नक्कली भन्ने हुन्छ ।